Deni: Fahad Yaasin waa in la badalaa hadii ay doorasho dhaceyso | KEYDMEDIA ONLINE
GAALKACYO - War-saxaafadeedkaan kasoo baxay Maamulka Saciid Deni ayaa lagu soo koobay sideed (8) shuruud oo ku xiran fulinya heshiiska doorashada.
Shuruudaha Puntland ee wadahadaladda doorashada ayaa kala ah:
1 - Madaxwayne Farmaajo waa in uu saxiixo digreeto uu hoos ugu dhigayo awoodaha xukuumadda, madaxtooyadda iyo baarlamaanka isla markaana uu bururiyo sharciyadii iyo qaraaradii ay xukuumadda iyo baarlamaanka meelmariyeen wixii ka dambeeyay 27-dii December, 2020 iyo 8-dii Febraayo, 2021.
2 - Kadib shaqaaqada 19-kii Febraayo, 2020 iyo doorka ay ciidamadda ku yeesheen, waa in la eryo taliyeyaasha ciidamadda milatariga, booliska iyo agaasimaha Hay'adda Sirdoonka NISA [Fahad Yaasin] laguna bedelo hogaan lagu kalsoonaan karo si ku meelgaar ah inta lagu guda jiro geedi-socodka wadatashiga. Si loo xaqiijiyo ahmiyadda dhexdhexaadnimada geedi-socodka una soo laabato kalsoonida saamileyda, ciidamadda ammaanka waa in ay ka fogaadaan ku lug-yeelashadda arrimaha geedi-socodka siyaasadeed.
3 - Iyadda oo la tixgelinayo in dowladda federaalka ay ku fashilantay in ay dhaqan-geliso heshiisyadii hore, Saaxiibada Caalamka ee Soomaaliya waa in ay xoojiyaan doorkooda damaanad-qaad ee fulinta geedi-socodka lagu heshiiyo.
4 - Waa muhiim in Golaha Wadatasiga Qaranka uu ku shaqeeyo qorsheysan jadwaleysan oo lagu dhaqan-gelinayo geedi-socodka doorashooyinka qaranka.
5 - In la sameeyo guddi xaqiiqo raadin ah oo baaritaan ku sameeya dhacdooyinka 19-kii Febraayo una kormeero dhaqan-gelinta geedi-socodka doorashooyinka heer qaran.
6 - Si loo xoojiyo kalsoonida dhamaan dhinacyadda iyo daahfurnaanta geedi-socodka, waa in dhamaan daneeyeyaasha iyo ururadda bulshadda loo oglaadaa in ay kawada qeybgalaan geedi-socodka doorashooyinka
7 - Horumarinta xorriyadda hadalka, xorriyadda isu-imaatinka iyo xuquuqda mudaaharaadka waxay laf-dhabar u yihiin dimuqraadiyadda. Maba’da waa lagu saleeyaa shaxda siyaasadda qaranka isla markaana si wax ku ool ah loogu damaanad-qaadaa geedi u socodka doorashooyinka
8 - Dhamaan shirarka heerka qaran ee mustaqbalka waa in ay ku qabsoomaan goob ammaan ah oo Muqdisho dhexdeeda ah.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni ayaa shalay qabatay shir jaraa’id uu si faahfaasan uga hadalay arriimo badan oo ku gadaaman xilliga kala guurka.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni oo ka hadlay arrin kasta oo masiiri ah ayaa Farmaajo ku eedeeyay inuu yahay nin u bira tumaya qabyaalad qaawan iyo dagaallo sokeeye oo ka qarxa Muqdiho kadibna ku faafa Soomaaliya oo dhan.
Waxyaabaha la yaabka leh ee Dani ka shekeeyay waxaaa ka mid ah in Farmaajo diiday nuuc kasta oo heshiis ah oo la soo bandhigay oo ku wajahan xalka gobolka Gedo, wuxuuna si cad ugu dooday in uusan ogoleyn in qabiilkiisa oo dagan Gedo uu maamulo Axmed Madobe.